ဝင်းကိုကိုလတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(1982-06-16) ဇွန် ၁၆၊ ၁၉၈၂ (အသက် ၃၈)
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
ဝင်းကိုကိုလတ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူ ၊ ဥပဒေရေးရာအကြံပေး၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ စာရေးဆရာနှင့် အမျိုးသားရေးဝါဒလှုပ်ရှားသူ ဖြစ်သည်။ သူသည် အမျိုးသားကွန်ယက် ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည်။  
ဦးဝင်းကိုကိုလတ်ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။  သူသည် ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၌ အဝေးသင်ပညာရေး ဥပဒေဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
ဝင်းကိုကိုလတ်သည် အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာကိုကာကွယ်သူဖြစ်သည်။ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင့်မြင့်နှင့်အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကွန်ယက်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံသားနှင့်ဘာသာရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီနှင့် နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သည်။ 
ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်, ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဝင်းကိုကိုကြီးလတ် ဦးဆောင်သော သံဃာတော်များနှင့် အမျိုးသားရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံရုံး အတွက် ကမာရွတ်မြို့နယ်မြို့နယ် ရှေ့မှောက်၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကရိုဟင်ဂျာ မရှိဟူ၍ မရှိကြောင်း ဆန္ဒပြ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဝင်းကိုကိုလတ်နှင့် အခြားသောအမျိုးသားရေး ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ဆရာတော်ပါမောက္ခ၊ သက်မျိုးဦး၊ နောင်ဒေါ်လေးနှင့် နေဝင်းအောင်တို့သည် အမေရိကန်သံရုံးတွင် “ ရိုဟင်ဂျာအသိုင်းအဝိုင်း” ၏ ဝေါဟာရများအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ သူသည်“ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်း” ဟူသောစကားစုကို အသုံးပြု၍ ဒေသတွင်းရှိရိုဟင်ဂျာများအား ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်ကမာရွတ်တရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည်။ သူသည်အခြားအမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင် ဗဟန်းမြို့နယ် တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၆ လချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။    
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူသည် ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပန်းတနော်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် နေရာကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုယ်စားလှယ် မန်းညွန့်သိန်း ကိုရှုံးခဲ့သည်။ 
↑ ၁.၀ ၁.၁ Aung Kyaw Min။ Nationalists warn NLD on constitution (in en)။ The Myanmar Times။ 1 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Aung Kyaw Min. "Nationalists warn NLD on constitution". The Myanmar Times. Retrieved 1 November 2017.
↑ အမျိုးသားရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ထောင်ဒဏ်ခြောက်လချမှတ်ခဲ့သည်။ (in en)။ The Irrawaddy (6 September 2017)။
↑ "အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူလို့ ခံယူထားသူတွေကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီ" (in en)၊ Frontier Myanmar၊ 12 May 2017။
↑ အမေရိကန်သံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြသည့် ဝင်းကိုကိုလတ်ပါ ၃ ဦးအမှုကို ဇူလိုင် ၇ရက်တွင်ထပ်မံရုံးချိန်းပေး (in my)။ Mizzima News (28 June 2017)။ 1 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pyae Phyoe Aung (18 August 2017)။ Four in court over US embassy protest (in en)။ Weekly Eleven။7November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aung Kyaw Htet (12 May 2017)။ Myanmar police officials lead Win Ko Ko Latt and Naung Taw Lay as they raise their cuffed hands (in en)။ gettyimages။ 1 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Htun Khaing (2 June 2017)။ Protestors blockade Kamaryut court as nationalist trial continues (in en)။ Frontier Myanmar။ 1 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူ ဝင်းကိုကိုလတ် အပါအဝင် လေးဦးကို ထောင်ခုနစ်လချ (in မြန်မာဘာသာ) 7daynews။ ငြိမ်းချမ်း (Thursday, September 28, 2017)။ 12 January 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ အောင်ကျော်မင်း (27 October 2015)။ အမျိုးသားပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့်ပါတီ၏ ထောက်ခံမှုမပါဘဲ ဆန္ဒမဲများအတွက် မဲပေးကြသည် (in en)။ The Myanmar Times။ 1 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Win Ko Ko Latt on VK
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝင်းကိုကိုလတ်&oldid=652051" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဧပြီ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။